R/wasaare Gaas oo magacaabay 27 xubnood oo iskugu jira wasiirro-ku-xigeenno iyo wasiiru – dawlayaal. – Radio Daljir
Muqdisho, July 22 ? R/wasaraha dawladda federaalka KMG ah ee Soomaliya ayaa goordhaweyd ku dhawaaqay magacyada 27 xubnood oo iskugu jira wasiirro-ku-xigeenno iyo wasiiru-dawlayaal kuwaasi oo ka mid noqonaya xukuumaddiisa cusub.
R/wasaare Prof. Cabdiweli Maxamed Cali ?Gaas? ayaa magacyada xubnahaan ka shaaciyey shir saxaafadeed uu ku qabtay madaxtooyada Soomaaliya subaxnimadii hore ee saaka isagoo carabka ku dhuftay xulashadooda in uu ku saleeyey aqoon iyo waayo aragnimo dheer oo ay u leeyihiin hawlaha loo igmaday.
Xubanaha uu magacaay R/wasaare Gaas ee ka mid noqonaya golihiisa xukuumadda ayaa iskugu jiray 18 wasiirro-ku-xigeen oo ka hoosayn doona 18-kii wasiir ee oo horay u magacaabay iyo 9 wasiiru-dawle oo qaabilsanaan doonno wasaarado gaar ah, marka laga reebo hal wasiiru-dawle uu si gaar ah u qaabilsanaan doona madaxtooyada.
Xubnaha uu maanta ku dhawaaqay R/wasaare Cabdiweli Maxamed Cali ‘Gaas’ ayaa iskugu jira kuwo ku cusub golaha xukuumadda intii ay jirtay dawladda federaalka ahi, halka kuwo kalena ay yihiin rag horay xilal u soo qabtay iyo xubno ka mid ah baarlamaanka.
Liiska wasiirro-ku-xigeennada iyo wasiiru-dawlayaasha.
2-Mudane Xaamid Sheekh Cali Maasheeye Wasiiru-dowlaha Wasaaradda Arrimaha Dibadda.
7-Mudane Maxamed Axmed Kaynaan Wasiiru-dowlaha Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshedaha